Slovakia firenena EU farany nanome baiko ny fanakatonana ho an'ny tsy vita vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Slovakia » Slovakia firenena EU farany nanome baiko ny fanakatonana ho an'ny tsy vita vaksiny
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Vaovao Mafana Slovakia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny praiminisitra Slovakia Eduard Heger
Tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay, i Slovakia dia nahita areti-mifindra vaovao, anisan'izany ny 8,000 mahery tamin'ny talata, miaraka amin'ny hopitaly tsy misy toerana hitsaboana marary COVID-19.
Mikatsaka ny hisorohana ny firongatry ny isan'ny otrikaretina COVID-19 sy ny fidirana hopitaly mandritra ny ririnina i Slovakia.
I Slovakia dia iray amin'ireo taha ambany indrindra amin'ny fanaovana vaksiny ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ary maherin'ny 50% ny olona mbola tsy voatendry.
Ny firenena manodidina ny 5.5 tapitrisa hatreto dia olona 2.5 tapitrisa ihany no nandrava ilay viriosy.
Raha mikasa ny hisoroka ny firongatry ny otrikaretina coronavirus sy ny fidirana hopitaly mandritra ny ririnina i Slovakia, taorian'ny nitaterana ny isan'ny tranga vaovao momba ny areti-mifindra COVID-19 vao haingana, ny praiminisitra ao amin'ny firenena, Eduard Heger, dia nanambara ny “hidy ho an'ireo tsy vita vaksiny” androany.
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, ny firenena eoropeana dia nahita areti-mifindra vaovao, anisan'izany ny 8,000 mahery tamin'ny talata, miaraka amin'ny hopitaly tsy misy toerana hitsaboana marary COVID-19.
Heger dia nanambara ny fameperana vaovao tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny alakamisy, nanao Slovakia ny farany vondrona Eraopeanina firenena hampihatra fameperana fanakatonana ho an'ny olona tsy nanana vaksiny COVID.
Ny fameperana vaovao ao Slovakia, izay manomboka amin'ny alatsinainy 22 Novambra, dia mitaky ny olona ho vita vaksiny na sitrana tamin'ny COVID-19 tao anatin'ny enim-bolana lasa izay hiditra amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana tsy ilaina, na hetsika ho an'ny daholobe.
I Slovakia dia iray amin'ireo taha ambany indrindra amin'ny fanaovana vaksiny ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ary maherin'ny 50% ny olona mbola tsy voatendry. Ny firenena manodidina ny 5.5 tapitrisa hatreto dia olona 2.5 tapitrisa ihany no nandrava ilay viriosy.
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, Aotrisy lasa firenena voalohany nametraka fameperana ho an'ny olona tsy vita vaksiny, satria nitady hamerana ny tsindry amin'ny hopitaly sy ny sampana fikarakarana vonjy maika. Nanomboka tamin'ny misasakalina ny alatsinainy io hetsika io ho an'ny olona 12 taona no ho miakatra izay tsy nahazo vaksiny COVID-19 na vao sitrana tamin'ny otrikaretina.
Ny fanjakana alemà any Bavaria sy ny Repoblika Tcheky nanaraka an'i Aotrisy tamin'ny famerana ny fidirana ho an'ny olona tsy vita vaksiny. Ny olona afaka mampiseho porofo amin'ny vaksiny na vao sitrana tamin'ny COVID-19 ihany no mahazo miditra amin'ny toerana ho an'ny daholobe, toy ny trano fisakafoanana, teatra, tranombakoka ary fivarotana.